WINE 6.3 yauya neakawanda epasi-epakati matinji | Linux Vakapindwa muropa
Ichokwadi kune kwavo kusarudzwa kwevhiki mbiri, chero bedzi ivo vasiri padyo nekusunungurwa kweshanduro vhezheni, uye mazuva gumi nemashanu mushure meiyo vhezheni yapfuura development, WainiHQ akakanda WAINI 6.3. Kunyangwe idzi shanduro dzichiwanzo kuunza mazana ekuchinja, mazhinji acho haashamisike, uye icho chinhu chakamboitika kunyanya svondo rino, nekuburitswa mune akawanda ari ematanho epasi-epasi.
Mune iyo rondedzero yenhau isu tinowanzo taura mabug fixes uye shanduko dzakaitwa, asi panguva ino tinogona kungoona masekondi chete. WINE 6.3 haizove iko kwakanyanya kukosha kuburitswa munhoroondo, zvirinani kana tikatsvaga zvakanakisa maficha, asi zvinhu zvinoshanduka mune iro basa ravakaita muhutu 455 kuchinja zvachose. Pane dzimwe nhambo isu tinogona kuverenga mazana maviri kana mashoma, saka panguva ino, zvirinani maererano nezvinoonekwa zvishoma, basa rakapeta iro rezvimwe zvakatangwa
WINE 6.3 inosimbisa
Semazuva ese, WineHQ inongotaura shanduko shoma, asi ndinoda kusimudzira basa rakaitwa naAlexandre Julliard, iye ega anga aine mutoro we183 yezvimedu zvese zvakaunzwa mushanduro iyi yekuvandudza. Iyo yakaratidza shanduko vhiki ino ivo:
Zvirinani kutsigira debugger mune iyo NT syscall interface.
WainiGStreamer raibhurari yakashandurwa kuita PE.
Kunyangwe WinRT inotsigira paWIDL.
Inesarudzo yekusarudzika yekuvaka maID.
Vashandisi vanofarira izvozvi vanogona kuisa WINE 6.3 kubva kune yayo kodhi kodhi, inowanikwa mukati izvi y iyi imwe link, kana kubva pamabhinari anogona kutorwa pasi kubva ku pano. Mune iyi link kubva kwatinga dhawunirodha mabhinari pane zvakare ruzivo rwekuwedzera iyo yepamutemo chirongwa repositi kuti ugamuchire izvi uye nezvimwe zvichavandudzwa mune ramangwana pavanongogadzirira masystem senge Ubuntu / Debian kana Fedora, asi kune zvekare mavhezheni e Android uye macOS.
Iyo inotevera yekuvandudza vhezheni ichave WINE 6.4 uye, kana pasina zvinoshamisa, izvo zvandinotarisira kufambisira mberi izvo zvisingaitike ndichiona kubata nguva kwavanoita muWineHQ, ichasvika munaKurume 12. Pakati pezvauchasuma, chinhu chega chatinogona kukuvimbisa ndechekuti ichauya nemazana ediki ekuvandudza uye kugadzirisa sekugara.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » WINE 6.3 inosvika isina makuru nhau, asi mazhinji akadzika-epasi zvigamba